अवार्ड,आलोचना र आयोजकको आक्रोश - Ek Jamarko
Home / विचार / अवार्ड,आलोचना र आयोजकको आक्रोश
अवार्ड,आलोचना र आयोजकको आक्रोश
~लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको चौथो बायो दोहोरी गीत अवार्ड भर्खरै वितरण भयो। अवार्ड वितरण समारोह लगत्तै अचम्म अचम्मका सितयुद्द हरु देखीए। अवार्ड पाउने कलाकार हरु अवार्ड पाएको खुशी बाड्न थाले। नपाउने कलाकार हरुले अवार्ड वितरण निष्पक्ष नभएको र हास्यास्पद समेत भएको तर्क राख्न थाले । कतै कतै त पाएको अवार्ड मै चित्त नबुझेको स्वर हरु पनि सुनिन थाले । सबैभन्दा ठुलो ब्यंग्य एकजना मोडल ले पाएको जुरी अवार्ड तिर गरीयो सामाजीक संजालमा।
आयोजक शिव हमालको आक्रोश~
यहा सम्म त ठिकै थियो, संसारका कुनैपनि अवार्ड हरु निर्विवाद हुदैनन। अवार्ड लगत्तै यस्ता पक्ष विपक्ष र वाद विवाद अनी संतुष्टी असन्तुष्टी ले माहोल तरंगीत हुनु स्वाभाविक नै हो। ब्यक्तीगत अथवा कुनै निश्चित प्राईवेट सेक्टर या कम्पनि विशेष ले गरेको अवार्ड कार्यक्रम भएको भए यस्तो साह्रो विवाद या आलोचना हुदैनथ्यो होला किनकी त्यस्ता अवार्डको सर्वाधिकार आयोजकमै निहीत रहने अवस्था पनि हुन सक्छ। तर यहा अवस्था फरक थियो। सम्पुर्ण लोक कलाकार लाई एकतावद्द गर्ने अभियानमा लागेको संस्था । लोक कलाकार हरुको आस्थाको केन्द्र मानिने सम्मानित संस्था ले गरेको अवार्ड कार्यक्रम थियो ।
आयोजकको आक्रोश प्रति सारु मगरको आलोचना
अझ गजप त त्यती वेला भयो जव आयोजक का तर्फवाट अवार्ड कार्यक्रमका संयोजक सिव हमाल अवार्डको निष्पक्षताको प्रतिरक्षामा उत्रीए । उनले कत्ति पनि विद्वता प्रदर्शन गर्न सकेनन। अवार्ड नपाउने र असंतुष्ट कलाकार लाई वर्ष भरी दुलोमा लुक्ने हरु भनेर आरोप लगाए साथै आलोचक लाई दुम्सी हरु भनेर सामाजीक संजालबाट आफ्नो अवार्डको प्रतिरक्षामा मत सार्वजानीक गरे । अव प्रश्न यहा नेर के उठ्छ भने के अवार्ड आयोजक ले दिने सार्वजानीक अभिब्यक्ती यस्तै हुन्छ? के आयोजकले असंतुष्ट हरुलाई जवाफ दिने शैली त्यही हो? आयोजकको त्यस्तो आक्रमक रबैया साँच्चै अपाच्य र निन्दनिय देखीन्थ्यो।यदी आयोजकले आफ्नो अवार्ड लाई निष्पक्ष स्वतन्त्र र धादलीरहित प्रमाणीत गर्नु थियो भने सामाजीक संजालमा सालिनता पुर्वक आउनुपर्थ्यो। असंतुष्ट हरु र अवार्ड नपाएका हरुलाई राम्रो काम गरेर अर्को पटकको अवार्ड जित्ने सृजना हरु ल्याउन हौसला दिनसक्नुपर्थ्यो ता की त्यो हौसला कलाकारको लागी चुनौती बनोस। तर संयोजक महोदयले त्यता तिर सोच्ने कष्ट गर्नुभन्दा धम्कीको भाषामा प्रस्तुत भएको अचम्म को दृष्य देखीयो।
निष्पक्षता प्रति मोडल महेन्द्र गौतमको प्रश्न
त्यसपछी कोही कलाकार भन्न थाले ~ नियम अनुसारको कुरा गर्नेहो भने लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल ले 'उपत्यका समन्वय समीती' को औचित्य स्थापनाकाल देखी अहिले सम्म पुष्टी गर्न सकेको छैन । प्रश्न हरु धेरै छन । विधानत: चलेको संस्थामा विधान अनुसारकै जिल्ला कार्यसमीती हरु छन अनी अन्चल कार्यसमीती हरु छन र केन्द्रमा केन्द्रीय कार्यसमीती छ । तर बागमती अन्चल कार्यसमीती पनि छ । अनी बागमती अन्चल अन्तर्गतका जिल्लाकार्यसमीती हरु बागमती अन्चल कार्य समीती मातहत छन । उपत्यका समन्वय समीती मातहत के हुने के रहने भन्ने कुरामा विधान मौन छ । सुरुमा विवाद हुने गरी यो समीती बनाईएको थियो ।अर्को कुरा उपत्यका समन्वय समीतीले अवार्ड वितरण गर्नेछ भनेर विधानमा लेखीएकै छैन तसर्थ आयोजक र संयोजक ले मनोमानी ढंगले अवार्ड वितरण गरे भनेर आरोप हरु आएको पनि देखीयो।
~मोडल एवं म्युजीक ब्यवसायी बाबुराम बोहोराको ब्यंग्य~
विधानमा उल्येख नभएपनि प्राय जिल्ला हरुमा क्षेत्रीय समीती हरु अस्तित्वमा छन । ति क्षेत्रीय समीती हरुको कुनै आधिकारीक हैसीयत चाही हुदैन। उपत्यका समन्वय समीती अन्तर्गत उपत्यकामा रहेका राष्टुरेण्ट हरुलाई समेटेर उप समीती हरु बनाएका छन । बागमती अन्चलमा रहेका जिल्ला कार्यसमीती हरु ले त्यहाका रेष्टुरेण्ट हरुलाई समेट्न नसकेर उपत्यका समन्वय समीती चाहिएको हो ? पक्का पनि हरेक जिल्लामा रेष्टुरेण्ट हरु सोही जिल्ला कार्यसमीती अन्तर्गत रहनु पर्ने हो। तर यहा कुरा बेग्लैछ। जिल्ला कार्यसमीती हुदा हुदै उपत्यका समन्वय समीती ले ईकाई हरु खडा गरेको छ । तसर्थ उसले आफ्नै ईकाई हरु र नजीकको सम्वन्ध भएका हरुलाई प्राथमीकता दियो भन्ने पनि सुन्नमा आयो।
~जुरी प्रति कलाकार दुर्गा पैडेलको आरोप~
समग्रमा हेर्दा अग्रज हरुको हुकुम प्रमांगी यसरी गढेर रहेको छ की 'लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान ठमेल या चावहिल कुनैपनि ईकाई समीती' उपत्यका समन्वय समीती मातहत रहन्छ । काठमाडौ जिल्ला कार्यसमीती को काम के हो? विधान अनुसार बनेका हुन भने ईकाईको जवाफदेहीता जिल्ला कार्यसमीती प्रति रहनुपर्ने हो । तर यस विषयमा विधान मौन छ भने विधानको कुन धारा या दफाले समन्वय समीती लाई ईकाई खडा गर्ने अनुमती दियो ? विना आधार उसले त्यसरी ईकाई हरु बनाउछ र केन्द्र उसको मनोमानीमा चुप बस्छ भने अवार्डमा पनि उसैको मनोमानी चल्छ त्यसैले अवार्ड निष्पक्ष हुन सकेन ।
~आयोजकको तर्फबाट अर्जुन थापा मगरको आलोचक लाई चुनौती~
यसरी ईकाई या उप समीती हरुको जवाफदेहीता सिधै अन्चल कार्यसमीती सरहको उपत्यका समन्वय समीती प्रति रहन्छ भने जिल्ला कार्यसमीती को काम चाही के हो त्यो कुरो बुझीन्न। अन्चल कार्य समीती ले जिल्ला कार्यसमीती हरुको रेखदेख र परिचालन गर्नु परम्परा सम्मत भएपनि अरु ईकाई हरु बनाउने कुरामा विधान मौन छ तर उपत्यका समन्वय समीतीले मनमौजी तरीकाले ईकाई या उप समीती हरु बनाउछ । दोहोरी साँझ हरुलाई आवद्द गराउछ। निर्वाचन पनि गराउछ र केन्द्रले त्यसलाई मान्यता पनि दिन्छ। कहीलेकाही त उपत्यका समन्वय समीती राष्ट्रीय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको भातृ संस्था जस्तै हो भनेर सामाजीक संजाल मा स्टाटस हरु आएको पनि देखीन्छ सुनिन्छ।
~कलाकार रविन लामीछानेको व्यंग्य~
अचम्म लाग्ने कुरा अरु धेरै छन 'राष्ट्रीय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल' यस्तो संस्था हो जहा विधानमाके लेखीएको छ त्यसको मतलव हुदैन। अगुवाको दिमागमा कस्तो सनक चढ्यो त्यै अनुसारको काम हरु हुदै जान्छन ।अवार्ड को विषय मा पनि विवाद हरु यथेष्ट छन । अवार्डको दर्ता खुलेको कुरा सार्वजानीक नगरी एकैपटक मनोनयन सार्वजानीक गरीयो भन्ने आरोप लगाउने हरुपनि छन । लोक दोहोरीको क्षेत्रमा दशक लामो समय विताई सकेकी गायीका या त्यस्तै पुरानो गायकलाई नव गायीका को अवार्डको लागी मनोनीत गरिन्छ । अवार्ड दिईन्छ पनि । यसरी पुराना कलाकार लाई नव गायक या गायीका मा मनोनीत गर्नु अवार्डको बाडफाड हो भनेर आरोप हरु लागीरहेछन ।
~कलाकार पिएन सापकोटा द्वारा आक्रोशीत प्रतिरक्षा~
लोक दोहोरी प्रतिस्ठान को स्विकृत बिधानमा प्रतिस्ठान का काम कर्तब्य तथा अधिकार हरुमा यस्तो अवार्ड गर्ने भन्ने कतै देखिन्न ।लोक दोहोरीका महत्वपुर्ण पक्ष हरु समेत समेट्न नसकीएको कार्यक्रमलाई लोक दोहोरी अवार्ड भन्नु नै असोभनिय हुन्छ । फेरी लोक दोहोरी प्रतिष्ठान अन्य अवार्ड गर्ने सस्था भन्दा धेरै फरक किसिमको सस्था हो । संस्थाले अवार्ड गर्नै नपाउने भन्ने होईन तर संस्था मातहत हुने औपचारीक कार्यक्रम हरु विधान निर्देशीत र नियमको अधीनमा हुनु पर्दछ । प्रतिष्ठानको उपत्यका समन्वय समीतीकै औचित्य स्पष्ट नभएको अवस्थामा उसले गरेको सम्मानले श्रस्टा कलाकारको मान बढ्नु भन्दा बेइज्जत गरेको अनुभुती हुन्छ ।
~सर्जक एवं संगीत ब्यवसायी सुवास रेग्मीको ब्यंग्य~
मनोनयनमा विवाद देखीएपनि अगील्ला पटक भन्दा यसपटक राष्ट्रीय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अवार्ड वितरण निकै समावेसी भएको तर निष्पक्ष नभएको गुनासोले दिनभरी सामाजीक संजाल तरंगीत भईरह्यो । एकजना अब्यवसायीक मोडल एवं संगीत ब्यवसायीले पाएको 'जुरी अवार्ड' निकै विवादको घेरामा तानियो । ब्यंग्य गर्नेहरुले जुरी अवार्ड लाई 'मुर्गा खोजी' अवार्ड सम्म भनेर ब्यंग्य हानीरहे । अर्को कुरा लोक दोहोरी साझमा नियमीत आउने र धेरै रक्सी खानेलाई खादा पहिराएर सम्मान गरेजस्तो अवार्ड मा पनि मनोमानी गरेको कारण धेरै शुभचिन्तक हरु निराश भएको गुनासो यत्र तत्र भईरह्यो ।
~चर्चित निर्देशक प्रकाश भट्टको आरोप~
अवार्ड,आलोचना र आयोजकको आक्रोश Reviewed by Jamarko TV on जून 13, 2016 Rating: 5